EPRDF oo Heshiis Dhex Dhigtay Cabdifataax Sheekh & Cabdi Iley - www.xogtashacabka.com
Search...	Home About us Contact us EPRDF oo Heshiis Dhex Dhigtay Cabdifataax Sheekh & Cabdi Iley
Published on Monday, 03 December 2012 16:52	Xogta Shacabka (Addis Ababa) Sida laga yaabo inaad la socoteen waxaa maalmahan xidhiidhkoodii dib u soo ceshaday Cabdi Iley iyo Cabdifataax Sheekh Cabdulaahi, kadib markii Cabdifataax ka hadlay telefishinka Jigjiga kana amaanay Cabdi Iley oo isku dhacsanaayeen tan iyo intii kooxda Jigjiga ay Cabdifataax ka eryeen horjoogenimada xisbiga. Sida ay noo xaqiijiyeen ilo lagu kalsoonyahey waxaa inay heshiiyaan labada nin kula taliyay dawlada dhexe oo rabta in Cabdifataax ku sii jiro golaha wasiirada.
Dhanka kale Daa’ud Maxamed Cali oo isna kamid ah xubnaha Soomaalida ah ee dawlada dhexe kamidka ah ayaa xidhiidh wanaagsan la lahayn maamulka Jigjiga iyadoo sidoo kalena aysan EPRDF ku talajirin inay heshiish dhex dhigto Daa’ud iyo Cabdi, maadaama ay saluugsanyihiin wax tarkiisa. Wasiirka kale ee isagu Soomaalida ugu jira Federaalka Axmed Shide ayaa lagu tilmaamaa inuu kamid yahay xubnaha ugu shaqada wanaagsan.
Isku shaandhayn ayaa la filayaa in lagu sameeyo dawlada federaalka Ethiopia, waxaana xubnaha kamid noqonaya laga soo calaamadeeyaa hadba kililka ay ka soo jeedaan xisbiga ka arrimiya. Lama garanayo cida laga yaabo in lagu badalo Daa’ud balse ilo ku sugan Addis Ababa ayaa noo sheegay in la soo calaamadeeyay cidii badali lahayd.